Akukho Mai Tai, akukho Vodka xa iAmerican F22 Raptor Fighter Jets ileqa uMkhosi Womoya waseRussia i-300 yeekhilomitha ukusuka eHawaii
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Akukho Mai Tai, akukho Vodka xa iAmerican F22 Raptor Fighter Jets ileqa uMkhosi Womoya waseRussia i-300 yeekhilomitha ukusuka eHawaii
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo zokulwa ezihamba ngenqanawa zadlula ngaphezulu kwePasifiki
Iijethi ezintathu ze-US F-22 Raptor zathunyelwa ngeCawa, nge-13 kaJuni, ngo-2021, ngaphezulu kwe-Pacific Ocean. Iijets zasungulwa eHawaii eHickam Air Force Base e-Oahu ukoyikisa amaRashiya ekude kunxweme lwase-US eHawaii.
I-US Airforce ine-F-22 Raptor yokulwa. Yinqwelomoya yenqwelomoya yesihlanu, ukuza kuthi ga ngoku, ithathwa njengeyona mpi yokulwa ehlabathini.
Lo mahluko ubeke isiseko sezinye iinqwelomoya eziza kulandelwa, uninzi lokuqala kwikhredithi yakhe:
I-F-22 yayiyeyokuqala ukwazisa ukubonakala kwe-radar esezantsi, ukuhamba ngenqanawa okukhulu, ukuhamba ngokukuko, kunye neenethiwekhi eziphambili zenzwa. I-F-22 nayo yayinamandla okulwa nenja, nangona yayingenamandla okudlala iindiza zamva nje zokulwa.
Ixesha lokugqibela lejeti yayisebenza eHawaii nge-13 kaJuni kulo nyaka iphendula uqhushululu lwaseRussia kwiikhilomitha ezingama-300 nje kuphela ukusuka eWaikiki Beach.
I-F-22 Raptor yinqwelomoya entsha yomkhosi womoya. Ukudityaniswa kwayo kobusela, ukuthengisa ngamandla, ukuqhuba, kunye nokudityaniswa kwee-avionics, kudityaniswa nenkxaso ephuculweyo, kubonisa ukutsiba okubonakalayo kwimikhosi yokulwa.
Umxhasi wenza zombini i-air-to-air kunye ne-air-to-ground missions. Inkqubela phambili ebalulekileyo kuyilo lwee-cockpit kunye ne-fusion ye-sensor kuphucula ukuqonda kwemeko yomqhubi. Kuqwalaselo lomoya-to-moya, i-Raptor ithwala ii-AIM-120 AMRAAMs kunye nee-AIM-9 Sidewinders ezimbini.
I-F-22 izisa uloyiko emini, olwenza ukuba ingazikhuseli nje kuphela kodwa nezinye iiasethi. Iinjini ze-F-22 zivelisa amandla ngakumbi kunayo nayiphi na injini yokulwa yangoku.
Umdibaniso woyilo lwe-aerodynamic kunye nokwanda kokuqina kuvumela i-F-22 ukuba ihambe ngenqwelomoya (ngaphezulu kwe-1.5 Mach) ngaphandle kokusebenzisa i-afterburner-uphawu olwaziwa njenge-supercruise.
Inqwelomoya yenqwelomoya yayingu-F / A-22 okwexeshana ngaphambi kokuba ibizwe ngokuba yi-F-22A ngoDisemba 2005.
Amagosa asemkhosini wase-US aqinisekisile ukuba i-F-22 yaxola ngeCawa, nge-13 kaJuni ngokuphendula iibhombu zaseRussia ezihamba kufutshane nendawo yomoya yaseMelika. Nangona iinqwelomoya zaseRussia zingakhange zingene eUnited States Air Space eHawaii. Iijethi zaseMelika kamva zabuyela kwisiseko.
Ekuqaleni, kwakusithiwa impendulo yomkhosi yayicelwe yi-Federal Aviation Administration (i-FAA) ukuba iqhube "ukujikeleza okungahambi kakuhle komoya."
Nge-13 kaJuni, ii-2 Raptors zaphehlelelwa yi-Indo-Pacific Command e-Camp HM Smith ukuya kumyalelo wayo ophantsi, i-Pacific Air Forces, i-154th Fighter Wing, isuka eHickam kwisiqithi sase-Oahu malunga no-4: 00 emva kwemini ilandelwa ngumRaptor wesithathu malunga emva kweyure. Kubonakala ngathi i-KC-135 Stratotanker - inqwelo moya yokugalela amafutha ezithuthi - nayo yasetyenziswa kwimishini, ikhomba kwinto yokuba inqwelo moya inokuba ifuna uncedo lokufaka amafutha.
Umba, ekungekho arhente, moya, okanye abameli bezomkhosi abachaze ngokweenkcukacha, isonjululwe kwaye abaQeqeshi aba-3 kunye ne-KC-125 Stratotanker babuyela eHickam Airforce baseSiqithi sase-Oahu.
Xa ebuzwa, isithethi se-FAA u-Ian Gregor wathi, "Sinobudlelwane obusondeleyo emkhosini." Umkhosi womoya une-F-22s, abaqhubi beenqwelomoya, abagcini, kunye nabasebenzi bezixhobo ekubizeni iiyure ezingama-24 ngemini eHickam ukuphendula izoyikiso zomoya kwiziqithi zaseHawaii njengenxalenye yemishini yokulumkisa.
Inyaniso yavela kwiintsuku kamva xa iinjini eziphambili zokukhangela zacima imibuzo kumanqaku agubungela esi sehlo.
Eyona nto yenzekileyo kukuba iRussia yayiqhube owona msebenzi mkhulu wasemanzini waselwandle kwi-Pacific Ocean ukusukela ngeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi-mhlawumbi ukuvula umgangatho wentlanganiso ka-Biden-Putin eGeneva. Ukuzivocavoca kwenziwa kuphela ngama-300 ukuya kuma-500 eekhilomitha ukusuka kumanxweme aseHawaii anelanga.
Kwiveki ephelileyo iRussia yagqogqa i-MiG-31 jet jet yokuhamba nenqwelomoya yomkhosi wase-US ngaphezulu kwe-Barents, iarhente yeendaba ye-RIA yabika ngokukhankanya ingxelo yase-Russia.
Umkhosi wase-Russia wathi inqwelomoya yase-US yachongwa njenge-P-8A Poseidon kwaye inqwelo moya yaseRussia yabuyiselwa kwindawo yayo kwakamsinya nje ukuba inqwelo moya yase-US yenze i-U-turn yaza yasuka kumda wase-Russia, ngokwe-RIA.
Ulwandle iBarents lulwandle olusecaleni koLwandlekazi iArctic, emi kunxweme olusemantla eNorway naseRashiya kwaye lwahlulwe phakathi kwendawo yaseNorway neyaseRussia.
Emuva ngo-2017, i-FAA yacela inqwelo-moya evela eHickam ngelo xesha kwathunyelwa ii-F-2s ukuya kupheleka inqwelo moya yaseMelika esuka eCalifornia ngenxa yomgibeli owayezama ukunyanzela indlela yakhe ukuba iye ngaphambili. I-FBI yamkhwelisa lowo wayekhwele apho xa befika emhlabeni.
Iphiko le-154th liyinxalenye yeHawaii yoMoya weSizwe waseHawaii kodwa isebenza ngokubonakalayo noMkhosi woMoya kwaye ibonelela ngokhuseleko lweziqithi. Inabaqhubi beenqwelo moya be-F-22 kwifowuni iiyure ezingama-24 ngemini eHickam yokuphendula ngokukhawuleza kwizoyikiso ezinokubakho kwiziqithi zaseHawaii.
Uninzi lweeyunithi zokuhamba ngenqwelomoya kummandla wePacific kutshanje ziye zonyusa uqeqesho kunye nokusebenza kwetempo. Umkhosi woMoya kutshanje uqalile ukusasaza iinqwelomoya zabo ejikeleze iPacific ngeenqwelomoya rhoqo ezihamba ngeenqwelomoya kwiziqithi ezikude.